အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာမတွေ့လို့ လူတစ်ချို့ကပြစ်တင် ဝေဖန်နေတာတွေကို ပြန်လည်ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ရဲရင့်အောင်….. – Cele Oscar
ပွညျသူတှေ နဲ့ အတူ အမှနျတရား ဘကျက ရပျတညျသူမြား ထဲတှငျ အဆိုတျော ရဲရငျ့အောငျ လညျး အပါအဝငျပဲ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ လကျရှိ ဖွဈပျေါနတေဲ့ လူထု လှုပျရှားမှု့ တှမှောလညျး တကျကွှစှာ ပါဝငျခဲ့ ပွီး နစေ့ဉျ လမျးပျေါ ထှကျပွီး ဆန်ဒ ထုတျဖျောခဲ့ သူ ဖွဈပါတယျ။ လတျတလော မှာ တော့ အခွအေနအေရပျ ရပျ ကွောငျ့ ဘေးကငျး ရာသို့ တိမျးရှောငျ နရေတာကွောငျ့ သူ့ရဲ့လှုပျရှား နမှေု့ တှကေို အပွညျ့အစုံ မဝေ မြှနိုငျတာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီအကွောငျး အရငျးတှေ ကို မသိဘဲ တဈခြို့ တှကေ ရဲရငျ့အောငျအား ဝဖေနျ ပွောဆို နကွေတာတှေ ရှိပါတယျ။ မနညေ့က သူ့ရဲ့ Facebook Story မှာ တျောလှနျရေး နဲ့ ပတျသကျပွီး ဘာလှုပျရှားမှု မှ မတှလေို့ အပွဈတငျ ဝဖေနျနတေဲ့ လူတဈခြို့ ခကျြကလြကျခြ ပွနျရှငျး ပွလိုကျ တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူကတော့ ဘာတှလေုပျခဲ့တယျ၊ ဘယျနရောမှာ ဘယျလို နခေဲ့ ရတယျ ဆိုတာ အကုနျထုတျ ပွောပွီး ကိုယျ့သတှေငျး ကိုယျတူး ပွ မှ၊ နစေ့ဉျ ဖွဈပကျြနတောတှကေို Facebook မှာ post တငျပေးနိုငျမှ တျောလှနျ တယျလို့ သတျမှတျနေ တယျဆိုရငျ သူ့ကိုလညျး boycott စာရငျးထဲသာ ထညျ့လိုကျ ကွဖို့ စိတျမကောငျးစှာ ရေးသားထားတာ ဖွဈပါတယျ။ သူလုပျသမြှ အရာတှဟော ဘယျသူမှ သဘောကြ ကနြေပျဖို့ မဟုတျဘဲ ကိုယျ့ယုံကွညျခကျြနဲ့ ကိုယျ လုပျနတောဖွဈကွောငျးကိုလညျး အခုလို ရေးသားပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ။
February (၁) ရကျနေ့ မနကျ (၆) နာရီကစပွီး ငါလုပျသမြှ အရာတှကေ မငျးတို့ သဘောကဖြို့အတှကျ မဟုတျဘူး။ ငါ့ယုံကွညျခကျြ နဲ့ ငါပါ အားတဲ့အခြိနျ စိတျထှကျပေါကျအနနေဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့ဈတှေ အောကျမှာ အာလာခြောငျ တာတှေ ရပျပါတော့ ငါတို့ လုပျစရာရှိတာ တှကေို တတျနိုငျတဲ့ ဘကျကနေ သိုသိုသိပျသိပျလုပျနလေို့ မရဘူးလား? ” ဆိုပွီး ရေးသား ထားတာဖွဈပါတယျ။ တျောလှနျရေး ကာလမှာ ကိုယျလုပျ နတေဲ့ တဈခြို့အရာ တှကေို လူမသိအောငျ လုပျဆောငျရတာမြိုးတှေ ရှိနတေတျပါတယျ။ ဒါတှကေို အပွဈ ပွောမနကွေဘဲ ကိုယျပါဝငျ နို ငျတဲ့ နရောက နသော ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျပေး ကွဖို့ ပွောကွားရငျး ဒီသတငျးလေးကို တငျဆကျပေးလိုကျ ရပါတယျ။
Crd…ye yint aung
ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည်သူများ ထဲတွင် အဆိုတော် ရဲရင့်အောင် လည်း အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထု လှုပ်ရှားမှု့ တွေမှာလည်း တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့ ပြီး နေ့စဉ် လမ်းပေါ် ထွက်ပြီး ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလော မှာ တော့ အခြေအနေအရပ် ရပ် ကြောင့် ဘေးကင်း ရာသို့ တိမ်းရှောင် နေရတာကြောင့် သူ့ရဲ့လှုပ်ရှား နေမှု့ တွေကို အပြည့်အစုံ မဝေ မျှနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအကြောင်း အရင်းတွေ ကို မသိဘဲ တစ်ချို့ တွေက ရဲရင့်အောင်အား ဝေဖန် ပြောဆို နေကြတာတွေ ရှိပါတယ်။ မနေ့ညက သူ့ရဲ့ Facebook Story မှာ တော်လှန်ရေး နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာလှုပ်ရှားမှု မှ မတွေ့လို့ အပြစ်တင် ဝေဖန်နေတဲ့ လူတစ်ချို့ ချက်ကျလက်ချ ပြန်ရှင်း ပြလိုက် တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို နေခဲ့ ရတယ် ဆိုတာ အကုန်ထုတ် ပြောပြီး ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူး ပြ မှ၊ နေ့စဉ် ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို Facebook မှာ post တင်ပေးနိုင်မှ တော်လှန် တယ်လို့ သတ်မှတ်နေ တယ်ဆိုရင် သူ့ကိုလည်း boycott စာရင်းထဲသာ ထည့်လိုက် ကြဖို့ စိတ်မကောင်းစွာ ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူလုပ်သမျှ အရာတွေဟာ ဘယ်သူမှ သဘောကျ ကျေနပ်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ် လုပ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း အခုလို ရေးသားပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
February (၁) ရက်နေ့ မနက် (၆) နာရီကစပြီး ငါလုပ်သမျှ အရာတွေက မင်းတို့ သဘောကျဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူး။ ငါ့ယုံကြည်ချက် နဲ့ ငါပါ အားတဲ့အချိန် စိတ်ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ သုံးတဲ့ Instagram ပို့စ်တွေ အောက်မှာ အာလာချောင် တာတွေ ရပ်ပါတော့ ငါတို့ လုပ်စရာရှိတာ တွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ်နေလို့ မရဘူးလား? ” ဆိုပြီး ရေးသား ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေး ကာလမှာ ကိုယ်လုပ် နေတဲ့ တစ်ချို့အရာ တွေကို လူမသိအောင် လုပ်ဆောင်ရတာမျိုးတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အပြစ် ပြောမနေကြဘဲ ကိုယ်ပါဝင် နို င်တဲ့ နေရာက နေသာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေး ကြဖို့ ပြောကြားရင်း ဒီသတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက် ရပါတယ်။